Kurera kurema kunonaka uye hutano | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Imwe yenzira dzinoshanda dzekuderedza uremu inzira yaDkt Gavrilov. Weight kurasikirwa chirongwa inosanganisira akati wandei matanho.
Kwepfungwa zvakanyatso tanga mukati kuti uderedze uremu, ziva izvo zvepfungwa zvikonzero zvekunyanyisa kudya;
Dzidza kusiyanisa nzara uye nzara;
Zvishoma nezvishoma kurumidzisa muviri kuda zvikafu zvinokuvadza;
Gadzira rakakodzera utano system kune ramangwana.
Izvo zvakaomera vazhinji kuti vadzikise kudya kwavo. Maitiro aya anogona kurerutswa nekukamuranisa zvigadzirwa zvakajairwa kuva zvinobatsira uye zvinokuvadza. Mafuta anoshandiswa, saladi kubva kumiriwo michero nemichero, zvigadzirwa zvemukaka wakaderera-hove, hove, zvikafu zvegungwa, zviyo, yakaoma makesi.
Kubheka, maswiti, bhotela, sosi, chikafu chakabikwa, masoseji, "chinokurumidza" chikafu, mbatatisi (kunze kwekubikwa), mabhanana, mazambiringa anoonekwa seanokuvadza. Chinhu chinonyanya kukosha kudzidza kudzidza kugadzirisa matambudziko ako pasina kukwenya.
Paunenge uchitanga kudzikamisa kudya kunovaka muviri, zvinodikanwa kuti urangarira kuti izvi hazvingobatsire kubvisa uremu hwakawandisa, asiwo kuchenesa muviri, kugadzirisa kugara zvakanaka uye kugadzikana.
Kudza uremu nemazvo
Ivo vanoda kuderedza uremu vanofanirwa kuderedza calorie kudya. Ipapo muviri unotanga kushandisa simba rayo rekuchengetedza - mafuta akaunganidzwa.
Iwe unofanirwa kudya zvishoma (4-6 times pazuva). Usafa nenzara, dzivisa kurambidzwa. Kana zvisina kudaro, mafungiro asina kunaka kune maitiro ekudzikira uremu achaumbwa, uye muviri unotanga kuchengeta mafuta.
Chinja kune chekudya chine hutano zvishoma nezvishoma, usazvitutumadza nekuda kwekate, kana uchinyatsoda kuchidya.
Makirasi ekudzidzisa epanyama anobatsira, asi kwete "kubudikidza nesimba". Ehe, ivo vanotungamira kumhedzisiro inokurumidza. Kune avo vasina kushandiswa kumitambo yekurovedza muviri, chero zviitwa zvemuviri zvichabatsira: kuchenesa imba, kutamba, kugara uchifamba (dzinenge nhanho zviuru gumi).
Kusiyana-siyana mune zvinovaka muviri - kurasikirwa uremu kune hutano uye hunonaka
Iyo menyu yekudya inogona kugadzirwa yakazvimirira. Seti yezvikafu zvine hutano zvinobvumidzwa zvinokubvumira kuti udye zvakasiyana uye zvinogutsa. Asi panguva imwechete, izvo zvinodiwa kuti uzadzikise zvinodiwa zve calorie kudzora, kuderedza huwandu hwe servings. Yakaputirwa yakarambidzwa.
Yakakura kudya kwemangwanani, 350-400 kcal. Izvi ndizvo zvekudya zveprotein (mazai kana huku, nyama, hove, hove dzegungwa), hutano makabheji ane fiber (zviyo zviyo zvoga, miriwo) uye pamwe mafuta omuorivhi kana pasita yakagadzirwa kubva kune dzisina kubikwa nuts kana mbeu (urbec).
Kudya kwemasikati (300-350 kcal). Vegetable kana mushwa mushwa, borscht (kune akawanda anonaka uye akaderera-calorie soups pane iyo menyu), kuwedzera nyama saladhi nema greens kana yechipiri mundiro.
Snack pa 150-200 kcal. Kazhinji chibereko, nzungu kana sangweji (chete isina bhata, masoseji).
Kudya kwemanheru Nyama-yakaderera nyama (sungura) kana shrimp, squid, hove, pamwe nechikamu chakakura che saladhi. Volumetric, inogutsa uye yakaderera-calorie - 250-300 kcal.
Inotapira uye kutsvedza - inoenderana?
Maswiti anotenderwa katatu pasvondo, kwete anopfuura makumi mashanu g pagamuchiro. Iyo inogona kuve yakaomeswa michero, stevia, yakagadzirwa nemaoko.
Inwa mvura maminetsi makumi matatu usati wadya kana mushure mekudya, mushure memaawa 30, 1,5-1,5 malita pazuva.
Dzimwe nguva, unogona kuve nekapu yekofi mangwanani kana green tii isina shuga.
Kudya kwekudzikisira uremu hazvibvumidze kufa kwenzara. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kugadzira zvikafu zvine hutano. Mhedzisiro yekushandisa iyi nzira yekudzikisira uremu ndeye kubvisa huwandu hwe4 kg yehuremu hwakawandisa pamwedzi.
Izvo zvakava zvinonakidza. Makorori mangani ari mu1 mandarin 2 apuro 3 mu 5 masupuni eshuga
makalori mangani ari mu1kg?
Kuderedza uremu muvhiki, kuongorora kwako?
ndiani akaedza kuchenesa jelly kurasikirwa uremu kwevhiki zviongororwa zvipi?
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,404 masekondi.